Semalt Expert Anotsanangura Maitiro Okudzivirira Mazvirwere Zvine Utachiona
Indaneti yakatipa mukana wekuita zvinhu zvizhinji kusanganisira kuwana ruzivo kubva kune imwe nzvimbo yepasi. Isu tava kunyanya kuziva, uye dzimwe nguva chido chedu chinogona kutitungamirira pasi zvese zvimaima zvitsvene pasina ruzivo rwedu. Vagadziri vezvokuchengetedza vanoti chinyorwa chikuru chekuchengeteka kumakombiyuta emushandisi ndiye mushandisi. Kakawanda, ndizvo zvatinoita kana kuti kwete kuita izvo zvatinokwanisa kutapukirwa nemarware.
Ross Barber, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt , anovimbisa kuti zvakakosha kuziva zvatinofanirwa kuita uye kusaita kuti tidzivise utachiona hwehutachiona. Kuziva kuti malware anowanikwa sei mumakombiyuta ndiyo danho rokutanga muhondo yekurwisa utachiona hwehutachiona - solgar whey to go greece.
Ko kombiyuta inotapukirwa sei nemarware?
1. Paunoshanyira nzvimbo isina kuzivikanwa
Zvinosuruvarisa kuti nguva yakawanda iwe usingazivi kana webhusaiti ine utachiona usati washanyira. Mukana wekombiyuta chero ipi zvayo inotapukirwa nemavirusi pavanoshanyira nzvimbo yacho inenge yakaenzana. Iwe unogona kuderedza dambudziko rekutsvaga pane imwe nzvimbo yekutengesa ngozi nekudzivisa kubva pakunongedza chero chinhu nezvose zvinokutarira iwe. Kazhinji, vaparidzi vechirungu vachaedza zvakanakisisa zvavo kuisa chimwe chinhu paInternet iyo ichawana vanhu vazhinji kune nzvimbo inotapukira.
2. Kuchengetedza mafaira kubva kunzvimbo dzisina kukwana
Sezvo kugoverana mafaira kwava tsika yezuva nezuva yevashandisi vevashandisi vepaIndaneti, vashandisi ve-cyber vakawana kuparadzira malware kuburikidza nekudhinda mafaira. Saka, vanobatanidza mafaira e-malware kumavhidhiyo, mumimhanzi, mafirimu, kana mamwe maofensi kuitira kuti avo vanoziva vasati vaziva kuti iyo yakaipa faira inopinda sei mumakombiyuta. Nguva dzose kuchenjera kutsvaga mafaira, pasinei nhepfenyuro kana shanduro software, kubva kune vanozivikanwa uye vanovimbika mhepo.
3. Paunenge uchinyora popups
Mamwe mashoko anopupurirwa angave emashoko kana nyevero pamusoro peimwe dambudziko iyo kombiyuta yako ine..Iyo "nyevero" inowanika ndiyo inowanzoshandiswa nzira dzeTrans attack. Mharidzo iyi inowanzova nemimwe mirayiridzo yemaitiro ekugadzirisa dambudziko racho, asi kazhinji inzira yekunyengera musikana kubvumira malware kuti aporese chigadzirwa chake. Ngorega kukanganwa Popups akadaro pose pavanoonekwa.
4. Kuzarura zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa zvisati zvanyorwa
Emails ane zvigadziriswe zvinofanira kushandiswa nehanya. Kana iyo email ichibva kune mumwe munhu wausingazivi, usatombozarura chibatanidzwa. Chaizvoizvo, zvakanakisisa ndechokubvisa email. Uye kana iri kubva kune mumwe munhu waunoziva, asi chibatanidziro chinotarisa chinokonzera, usakurumidza kuchikanda. Kutanga, taura nomunhu wacho kuti aone kuti chibatanidzi chii uye kana uchichikanda, chengetedza ne-up-to-date anti-malware software isati yavhura.
5. Kushandisa USB drive
Apo USB tsvimbo inotapukirwa, inogona kuparadzira malware kune imwe kombiyuta yakabatanidzwa. Mamwe matanda ane utachiona hwakanyanya zvokuti anogona kukanganisa kakombiyuta yako yose pakarepo. Kuti uchengetedze kombiyuta uye mafaira ako akachengetedzeka, ingogamuchira zvigodo zve USB kubva kuvanhu waunoziva uye NGUVA dzose shandisa tsvimbo usati wavhura.
Tsamba dzekuchengetedzwa kwekombiyuta
Pano pane zviyero zviviri zvisingambofaniri kuongororwa:
Kuisa utachiona hwekuchengetedzwa kwehutachiwana
Izvi zvinogona kunge zvichionekwa sechinhu chinokosha kuti urambe uchisimbisa, asi pane dzakawanda zvemakombiyuta, kunyanya makombiyuta emusha, anoshandiswa pasina kuchengetedzwa kwemarware. Kana uchida kuchengeta kombiyuta yako yakachengeteka kubva kune hutachiona hwehutachiona, shandisa virusi / malware kuchengetedzwa ikozvino. Iwe unogona kunyange kuisa mahara ega anti-virusi software yakapiwa nevatengi vanozivikanwa seMicrosoft - kunyange iyi isiri nzira yakanakisisa, zviri nani kudarika kusachengetedzwa kwema-malware zvachose.
Chengeta yako system uye anti-malware software inovandudzwa
Kuchengetedza yako system uye software ndiyo imwe yepamusoro yekuchengetedzwa kweiyo internet. Kudzokorora hurongwa hwako hwekushanda uye zvishandiso nguva dzose nevanotyairi vemazuva ano, zvigadziriswa, uye kuchengetedzwa kwekuchengeteka kunovimbisa kuti chigadzirwa chacho hachikwanisi kubva kune huwandu hwekuchengetedzwa kwekuchengetedza.
Utachiona hwemarware hunogona kuva chimwe chezvinhu zvinosuruvarisa zvinogona kuitika kune kombiyuta yako kana imwe chigadzirwa. Kana zvikaitika, regai zvirege kuitika nekuda kwekusateerera kwako. Iva nechokwadi chokuti iwe unogara uchigadzirirwa ruzivo pamusoro pekuona nekudzivirira utachiona hwehutachiona.